Voadika ny 30 Desambra 2012 15:11 GMT
Mahery ny 98 tapitrisa ny isa tontalin'ireo mpampiasa Finday any Bangladesh ankehitriny ary ny ampahany betsaka amin'izy ireo dia vehivavy avokoa. Vao haingana izay no nanombohana tolotra fitandroana ny fahasalaman'ny renim-pianakaviana izay hikendrena ity vahoaka ity amin'ny alalan'ny finday. Aponjon dia finday mifototra amin'ny tolotra momba ny fahasalamana ho an'ireo ho renim-pianakaviana sy ireo tera-bao any Bangladesh eo ambanin'ireo famantaran'ny Mobile Alliance for Maternal Action (MAMA). Tolotra amin'ny vidiny mirary dia mirary izany, maimai-poana ho an'ireo 20 isanjaton'ny mpampiasa azy mahantra indrindra ary mikatsaka ny hampihenana ny aretina sy ny fahafatesana mahazo ireo renim-pianakaviana sy ireo zaza menavava. Kirsten Gagnaire, manoratra tamin'ny Talen'ny Fiaraha-miasan'ny MAMA Eran-tany:
Tamin'ny Septambra 2011 no nampahafantarina tany amin'ireo toerana 13 any amin'ireo distrika efatra any Bangladesh miaraka amin'ireo mpampiasa 1200 anatinà fototra fitarihana ny tolotra Aponjon . Ho famenoana ny fitarihana lavorary, nanomboka ny hetsika eo amin'ny sehatra nasionaly ny Aponjon. Mikendry ny hahatratra mihoatra ny 2 tapitrisa, isan'izany ireo vehivavy sy ireo tera-bao ny Aponjon amin'ny 2015.
Ny Toe-pahasalaman'ny Reny sy ny Zanaka any Bangladesh